Te hanao makiazy ny zanako vavy, aloha loatra ve? | Bezzia
Tony Torres | 12/01/2022 20:00 | Reny torohevitra
Ny dingana tsirairay amin'ny fiainan'ny ankizy dia samy hafa, miavaka ary indrindra indrindra, mahery. Ny fizotry ny fahamatoran'ny ankizy dia samy hafa ho an'ny tsirairay amin'izy ireo, na izany aza, ny fahasarotana sy ny fotoan-tsarotra dia tonga ho an'ny rehetra. Indrindra fa mihamanatona ny fahatanorana, miaraka amin’ny maro hormonina aretina sy ny fiovana eo amin`ny toetra ny ankizy, izay mahatonga ny ray aman-dreny tsy hain'ny ray aman-dreny tsara ny fomba hanaovana izany.
Sarotra ny mandray fanapahan-kevitra momba ny tanora, satria raha ny marina dia toa olon-dehibe izy ireo, fa raha ny marina dia mbola zaza. Ankizy izay mampivelatra ny maha-izy azy, ny tsirony sy ny fialam-boly izay misy ankehitriny voafehin'ny fampahalalana rehetra azony avy amin'ny Internet. Ary eo no ahitan'ny ankizy tontolo mahafinaritra sy mampiady hevitra toy ny tontolon'ny makiazy.
1 Te hanao makiazy ny zanako vavy fa ataoko aloha aloha
1.1 Ampianaro hanao makiazy izy
Te hanao makiazy ny zanako vavy fa ataoko aloha aloha
Maro ny ankizivavy sy ny ankizilahy tia makiazy, satria ankizy izy ireo ary faly maka tahaka ny olon-dehibe na milalao akanjo. Lalao ho azy ireo ny fanaovana makiazy ary na dia eo aza izany dia tsy olana ho an'ny ray aman-dreny izany. Na izany aza, Inona no mitranga rehefa misy tovovavy milaza fa te hanao makiazy? Inona no efa olon-dehibe makiazy, ny mandeha any an-tsekoly na mandany fotoana miaraka amin`ny namana.
Amin'izay fotoana izay, ny zavatra mahazatra indrindra dia ny hoe manana instinct mandà ny tenanao ianao, mieritreritra fa mbola kely loatra izy ary maneho izany eo anatrehany. Zavatra tsy isalasalana fa mety hitranga na iza na iza, na dia mbola fahadisoana aza izany. Satria rehefa misy ankizy milaza faniriana aminao, mba ho hitanao hoe manao ahoana ny toetrany, misokatra eo anoloanao, dia manao fanazaran-tena amin'ny fifampitokisana izay mety ho tapaka tsy azo havaozina.
Noho izany, rehefa mahazo vaovao toy izany, ny zavatra voalohany sy manan-danja indrindra dia ny fitazonana ny fifehezana sy ny fiheverana tsara ny tokony hatao. Fadio ny milaza zavatra mety hanafintohina an'ilay sipa, aza miteny aminy hoe vavy izy na efa lehibe, fa ny tena azo inoana dia hoe amin'ny zavatra hafa dia lazainao aminy fa tsy tovovavy intsony izy. Henoy ny faniriany, angataho izy hilaza aminao izay karazana makiazy tianyLazao azy fa hieritreritra momba izany ianao ary hiresaka momba izany amin'ny fotoana hafa.
Ampianaro hanao makiazy izy
Raha te hanao makiazy ny zanakao vavy, dia hanao izany izy, na tsy misy fankasitrahanao. Ny mahasamihafa azy dia raha manao izany miaraka amin'ny fanekenao izy, hataonao araka ny tokony ho izy, miaraka amin'ny vokatra mety ary mianatra tsikelikely ny atao hoe maquillage. Raha manao izany amin'ny fetsy ianao dia tsy maintsy mampiasa vokatra mora, nindramina na ratsy kalitao. Tsy ho hainy ny mampihatra azy io, na ny fomba fanaovana maquillage manampy azy ho tsara tarehy kokoa, satria izay no atao hoe makiazy.
Tsy maintsy ho avy io fotoana io, satria raha maneho ny faniriany hanao makiazy ny zanakao vavy, dia ho avy izany na ho ela na ho haingana. Noho izany, ampio izy hahita ny tontolo mahatsikaiky makiazy, fa mampientam-po ary afaka mianatra zavatra maro ny. Raiso ny zanakao hiantsena amin'ny vokatra voalohany, satria tena ilaina ny mampiasa makiazy mifanaraka amin'ny taonany.
Mifidiana zavatra fototra izay hahafaly ny zanakao vavy, tsy mila mampiasa ny vokatra rehetra. Azonao atao ny mividy azy moisturizer misy loko sasany, crème tena misy ranon-javatra misy fiarovana amin'ny masoandro izay miaro ny hodiny ihany koa. Lokomena amin'ny tonony mavokely, izay ahitanao loko sasany amin'ny molotrao nefa amin'ny fomba an-kolaka. afaka koa mampiasa loko tany na aloky ny paiso ho an'ny maso, vokatra izay hanampy anao handoko ny takolakao koa.
Amin'ireo fototra ireo dia afaka manomboka ny kitapo makiazy ny zanakao vavy. Ary ianao, dia hanana fiadanan-tsaina amin'ny fahafantarana izany mampiasa ny vokatra, izay manana kalitao, mifanaraka amin'ny taonany ary miaraka amin'ny loko izay tsy hahatonga azy ho antitra na ho saron-tava. Amin'izany fomba izany, dia ho faly izy, hahatsapa ho henoina, ho azony, ary rehefa mila miresaka aminao izy, dia hisy fitokisana sarobidy. Zavatra tsy isalasalana fa mendrika izany, na dia izany aza dia ilaina ny mamela ny zanakao vavy hanao makiazy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Reny torohevitra » Te hanao makiazy ny zanako vavy, aloha loatra ve?
Ahoana ny fiatrehana ny mpivady ny krizy nateraky ny fahatongavan'ny zanany voalohany